Hoobiyayaal dad ku dhaawacmeen oo ku dhacay qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
STN News March 1, 2018 Leave a comment
Afhayeenka Wasaaradda Amniga Soomaaliya Cabdicasiis Xildhibaan oo la hadlay warbaahinta ayaa faah faahin ka bixiyay Hoobiyayaal lagu soo tuuray qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho iyo qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay duulleedka magaalada Muqdisho.
Afhayeenka ayaa sheegay in labo Hoobiye oo ay soo tuureen sida uu hadalka u dhiggay Al-shabaab mid ka mid ah oo ku dhacay Xaafadda Baar-Ayaan uu sababay dhaawaca ilaa Shan ruux kaddib markii uu ku dhacay gurigii ay ku jireen, halka kan kalana uu meel cidlo ah ku dhacay wax khasaare ahna sababin.
Afhayeenka oo dhinaca kale faah faahin ka bixiyay Qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay dulleedka Muqdisho ayaa sheegay in gaari yar oo laga soo buuxiyay waxlaha qarxa uu weerar ismiidaamin ah ka geystay deegaanka Siinka Dheer, gaar ahaan Barkoontarool oo ay ciidamadu ku sugnaayeen.
Weerarkaasi ayuu sheegay in uu sababay dhimashada Askari ku sugnaa goobta uu qaraxa ka dhacay qofkii Ismiidaaminta geystay.
Dhinaca waxaa uu sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM deegaanka Carbiska ku soo bandhiggeen hub iyo walxaha qarxa oo laga soo qabtay sida uu hadalka u dhigay Al-shabaab.
← Afrika “kama guulaysan karto macluusha”
Shan askari oo lagu dilay weerar ka dhacay Mandera →